၁၉၇၃ မှာ စွယ်တော်ရိပ်ကနေ ကဗျာစာအုပ်လေးတအုပ်ကို ကျွန်တော်နဲ့ ကိုမြင့်စံတို့ ထုတ်ခဲ့ကြတယ်။ "မနက်ဖန်ရဲ့ ရင်ခုန် သံ" ဖြစ်တယ်။ ကိုမှိုင်းပေးတဲ့နာမည်ပါ။ သူက ဒဂုန်တာရာနဲ့ ဆရာကြီးမှိုင်းကို ကိုးကွယ်လေးစားသူပါ။ စာအုပ်လေးကို မောင်ဆန်းညွန့်က ဖယောင်းမှာရေးပြီး ကိုမှိုင်းက လိုတာတွေကိုစီစဉ်ပေးတယ်။ နောက်ကျောဖုံးမှာ ဆရာကြီးမှိုင်းရဲ့ ထီမထင် ကျောင်းတော်သား စာပိုဒ်၊ ဂေါ်ကီရဲ့ ဝါကျ၊ လူရွှင့်ရဲ့ 'စာပေဟာ မိုးနဲ့မြေကို မှောက်လှန်မပစ်နိုင်ဘူး' ဆိုတဲ့ ဝါကျတွေကို ကျွန်တော် ဖော်ပြခဲ့တယ်။
စွယ်တော်ရိပ်ဆိုတာ RIT လို့ခေါ်တဲ့ စက်မှုတက္ကသိုလ်ရှေ့က စာအုပ်အငှားဆိုင်လေးပါ။ အဲဒီမှာ ကျွန်တော်တို့ စုစည်းခဲ့ကြ တယ်။ "ကျွန်ခေတ်မှာ လူလိမ္မာ မလုပ်ချင်စမ်းပါနဲ့" ဆိုတဲ့ ဆရာကြီးမှိုင်းရဲ့ သြဝါဒနဲ့ ကြီးပြင်းလာတဲ့ ကျောင်းသားဆိုးတွေပေါ့။
"ညနေစောင်း မှောင်ရီရီမှာ ငါ အိမ်ရှေ့မြေနီလမ်းကနေ ကြည့်လိုက်ရင် သစ်ပင်မှာတွဲနေတဲ့ လင်းဆွဲငှက်တွေကို ဒီမှာ ကျ ဆုံးသွားတဲ့ ဝိဉာဉ်တွေလို့ ခံစားရတယ်" ဟု ဘာတာလမ်းထဲမှ နာမည်ကျော် ကဗျာဆရာမကြီးက ပြောဖူးပါတယ်။
"ကမ္ဘာမကြေ ဗမာပြည်…. ဒါ တို့ပြည်" သီချင်းတစ ထွက်လာသည်။ ထို့နောက် လမ်းတလျှောက်လုံးတွင် ကျွန်တော်တို့ သီ ချင်းသံ "ကမ္ဘာမကြေ"
မိုးလင်းရင် ပဲပြုတ်၊ ကောက်ညင်းပေါင်း အော်ရောင်းသံတွေ ကြားရတယ်။ ရထားတွေက ဖြတ်ဖြတ်မောင်းသွားတယ်။ ဘော လုံးကန်စရာ ကွင်းလေးရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကဗျာရွတ်ကြတယ်။ လက်ရေးမဂ္ဂဇင်းတစောင်ကို ကျွန်တော်တို့ ထုတ်ခဲ့ကြ တယ်။ "ခေါ်သံ" ။ ကျွန်တော်တို့ ကာလတုန်းက (AAWB) အာရှအာဖရိက စာရေးဆရာ ကဗျာဗျူရိုကထုတ်တဲ့ "The Call" မဂ္ဂဇင်းဆိုတာ ရှိပါတယ်။
"ဖိုးအေးမလုပ်နဲ့….. ဟေ့ကောင်တွေ……" သံတံခါးတွေကို ကျွန်တော်တို့ ဝုန်းဒိုင်းဆောင့်၊ ဝါဒါတွေ ပြေးလာ…. တံခါးတွေ ဖွင့်… ထုတ်ရိုက် ခုခံကြ….. ပုံစံထိုင်။ တိုက် (၁) ကနေ ကျွန်တော်တို့ ပြောင်းခဲ့ကြတယ်။
"……….အများအတွက် ကုဋေကုဋာဆိုတာ…..ကိုယ့်အတွက် ဆကေ (နည်းနည်း) ရာပါရေ….၊ အရာရာ အောင်မြင်ဖို့အတွက် တိုက်ပွဲဝင်လာခဲ့ကတ်တေ…….။ ဒေနေရာက အိမ်ကိုလွမ်းလို့ အားလည်းမငယ် နိန်ဂဲ့ဝေ၊ ငရို့ပိုင် ပျော်စီကြောင်းနဲ့ မှန်းဆ ဆုတောင်း ပါရေလေ… လွမ်းရသူ့အကြောင်း မပါစီဝေ………"
"ကျွန်တော် ကျောင်းသားပါ အလုပ်…….."
"စစ်ပုလိပ် အကျဉ်းစခန်းများဆီ အစာရေပြတ်ကာ သေအောင်သတ်ပါစေ အောင်လံလွှင့်ကာ နောက်မတွန့်ခဲ့သည် - ဒူးမ တုပ်ခဲ့သည်… ဦးမညွတ်ခဲ့သည်……" နောင်တော်ကြီးများဆိုခဲ့သော တေးသည် နရသိမ် နံ၇ံများတွင် ပဲ့တင်ထပ်နေခဲ့သည်။
"……မီးလောင်မြေ တစပြင်မှာ အတည်၊ ထွန်းသစ်တဲ့ တက္ကသိုလ် ဒို့ဆောက်မည်….၊ စစ်အာဏာရှင် ဖျက်ဖြိုကာအတည်.. ပြည်သူ့ခေတ်တွင် ဒို့တတွေ ကျောင်းတက်မည်…….." တို့ အစ်ကိုတွေ ဆိုခဲ့ဖူးသော တေးတစကို ဆိုညည်းရင်း နရသိမ် ညများ ကို ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။
Contemporary Experience Maung Khaing Aung (Sittwe)